WhatsApp သည်ခြောက်လအတွင်းအိန္ဒိယမှလူသို့တစ် ဦး ချင်းငွေပေးချေမှုပြုလုပ်ရန်စီစဉ်ထားသည် Androidsis
WhatsApp သည်အိန္ဒိယနိုင်ငံသို့တစ်လမှလူတစ် ဦး ချင်းငွေပေးချေမှုကို ၆ လအတွင်းစတင်ရန်စီစဉ်ထားသည်
ဟိုဆေး Alfocea | | NOTICIAS, Whatsapp
WhatsApp သည် ၂၀၁၇ ခုနှစ်မကုန်မီအိန္ဒိယတွင်သက်တူရွယ်တူအချင်းချင်းငွေပေးချေခြင်း (အသုံးပြုသူများအကြားအသေးစားငွေပေးချေခြင်း) ကိုမိတ်ဆက်နိုင်သည်။ ဤသည်မှာအိန္ဒိယသတင်းဝက်ဘ်ဆိုက်မှထုတ်ဝေထားသောသတင်းအချက်အလက်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါကဲန် အရာ, ထို့အပြင်ကြောင်းဖော်ပြသည် WhatsApp သည်တိုင်းပြည်၏ကိုယ်ပိုင်အစိုးရ၏ကျောထောက်နောက်ခံပြုသည့်စနစ်ကိုအသုံးပြုလိမ့်မည် သုံးစွဲသူများအား app မှတစ်ဆင့်ငွေပို့ရန်ခွင့်ပြုသည့် Unified Payments Interface (UPI) ဟုခေါ်သည်။
WhatsApp သို့ peer-to-peer ငွေပေးချေမှုများရောက်ရှိလာခြင်းသည်အတော်အတန်ကြာခဲ့ပြီဖြစ်သောကောလာဟလဖြစ်သည်။ တကယ်တော့, အက်ပလီကေးရှင်းကိုပူးတွဲတည်ထောင်သူ Brian Acton ကအိန္ဒိယသို့ခရီးစဉ်အတွင်း WhatsApp သည်ထို ၀ န်ဆောင်မှုကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှု၏“ အစောပိုင်းအဆင့်များ” တွင်ပြီးခဲ့သည့်ဖေဖော်ဝါရီလကကြေငြာခဲ့သည်။ ဤအတောအတွင်း WhatsApp ၏ပိုင်ရှင်, Facebook သည် Messenger application တွင်လူတစ် ဦး ချင်းမှငွေပေးချေမှုကို ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင်ယူနိုက်တက်စတိတ်တွင်စတင်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်.
WhatsApp ကိုအတည်ပြုခြင်းမရှိသလိုငြင်းဆိုခြင်းမရှိသော်လည်း ဒီအချက်အလက်လူအချင်းချင်းမှငွေပေးချေမှုကိုမကြာမီစတင်တော့မည်ဟုထင်ရသည်။ PayPal ၏ဥက္ကpresident္ဌဟောင်းဒေးဗစ်မားကတ်စ်သည် Facebook တွင် Messaging ထုတ်ကုန်များဒုဥက္ကPresident္ဌအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသော ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် Wired နှင့်အင်တာဗျူးတွင်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ငွေပေးချေမှုအစီအစဉ်၏အလားအလာကိုပြောကြားခဲ့သည်။ ယင်းကို peer-to-peer ငွေပေးချေမှုအတွက်သာမကသုံးစွဲသူများနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအကြားအဆက်အသွယ်မရှိသောငွေပေးချေမှုအတွက်လည်းအသုံးပြုနိုင်သည်.
ငွေပေးချေမှုများအတွက်မာဂျင်မြင့်မားသည်မဟုတ်, ငါတို့ကျယ်ပြန့်အတိုင်းအတာချင်တယ်။ ကုမ္ပဏီများသည်အထူးသဖြင့်သို့မဟုတ်ရာထူးတိုးခံရရန်ငွေပေးလိုကြပြီး၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ကြီးမားသောအခွင့်အလမ်းဖြစ်သည်Marcus ကဆိုသည်။
ထို့ကြောင့် WhatsApp သည်အလားတူလမ်းကြောင်းကိုလိုက်ရန်အလွန်ဖြစ်နိုင်သည်။ မင်းကိုမင်းရဲ့ပလက်ဖောင်းပေါ်မှာကုမ္ပဏီတွေရှိစေချင်တယ်ဆိုတာငါတို့သိပြီးသားပါ ဘက်ပေါင်းစုံငွေပေးချေမှုများအတွက်အခြေခံအုတ်မြစ်ကိုတည်ဆောက်ခြင်းဝန်ဆောင်မှုကိုငွေရှာဖို့အဘို့အနည်းလမ်းအသစ်ဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကိုယခုနှစ်နှင့်အိန္ဒိယတွင်စတင်မည်လားဆိုသည်ကိုစောင့်ကြည့်ရ ဦး မည်ဖြစ်သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေရန်ကြာမြင့်စွာစောင့်ရန်မလိုပေ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » WhatsApp သည်အိန္ဒိယနိုင်ငံသို့တစ်လမှလူတစ် ဦး ချင်းငွေပေးချေမှုကို ၆ လအတွင်းစတင်ရန်စီစဉ်ထားသည်
Tizen, Samsung ၏ Android နှင့် Android တို့အတွက်ရွေးချယ်စရာ